तपाईंको पिसाब रोक्ने बानी छ ? निम्तन सक्छ जटिल समस्या !! जानकारीको लागी शेयर गरौं ! | सुदुरपश्चिम खबर
धेरै मानिसले विभिन्न बहानामा पिसाब रोक्ने गर्छन् । अन्य कामलाई महत्व दिएर पिसाब रोक्नु भनेको शरीरको नियमिततालाई बिगार्नु मात्र हो । यदि तपाईमा पिसाब रोक्ने बानी छ भने तपाईलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले सताउन सक्छ । व्यक्तिको ब्ल्याडर (पिसाब थैली) नियमित खाली राख्नुपर्ने चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
उमेर अनुसार व्यक्तिलाई पिसाब लाग्ने भएता पनि कम्तिमा प्रत्येक ३ घण्टामा एक पटक पिसाब लाग्ने अवस्थालाई सामान्य मानिन्छ । व्यक्तिको उमेर अनुसार पनि कति समयमा पिसाब लाग्ने भन्ने हुन्छ ।
ब्ल्याडर (पिसाबथैली)को सिधा सम्बन्ध मस्तिष्कसँग हुने तथ्य विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरेको छ । त्यसैले पनि यदि तपाईको ब्लयाडर रिसेप्टर्स भरिएको छ भने तपाईको मस्तिष्कले तपाईलाई जानकारी दिन्छ र पिसाब लागेको थाहा पाउनु हुनेछ ।
तर कतिपय अवस्था तथा परिस्थितिका कारण व्यक्तिहरु पिसाब लाग्दा लाग्दै पनि बेवास्ता गरेर पिसाब रोकेर बस्छन् । यसले उनीहरुमा कालान्तारमा गएर नकरात्मक प्रभाव पार्दछ । त्यसैले, पनि पिसाब रोक्नु व्यक्तिको स्वास्थ्यको निम्ति हानिकारक मानिन्छ ।
पिसाब रोक्नाले स्वास्थ्यमा यस्ता समस्या देखा पर्नसक्छः१. यदि तपाईले आफ्नो पिसाबथैली पटक पटक खाली राख्नु भएन भने र यो क्रम निरन्तर २ दिन चलेमा यसबाट तपाईमा पिसाबनली संक्रमण हुने जोखिम उच्च रहन्छ ।२.पिसाब रोकेको खण्डमा यसले पिसाबथैलीमा एट्रोफिको शुरु हुन्छ । र, यसलगत्तै तपाईमा असंयमित हुने बानीको विकास समेत हुन पुग्छ ।
३. १० घण्टाभन्दा बढि पिसाब रोक्नुहुन्छ भने तपाईको पिसाबथैलीले प्रतिधारण विकास गर्दछ । यसको अर्थ तपाईको मुत्राशयको मांसपेशीलाई आराम नमिल्ने हुदा तपाई आफूले चाहे पनि पिसाब गर्न नसक्ने वा आफूलाई यसबाट राहत दिन नसक्ने हुनुहुन्छ ।
४. कतिपय अवस्थामा पिसाब रोक्नाले पिसाबथैली फुट्ने सम्भावना समेत हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : माल्दिभ्समा को,रोना वि,रुद्धको खोप घरघरमै पुगेर दिइने !!समाल्दिभ्स सरकारले घरघरमा पुगेर कोरोना विरुद्धको खोप दिने भएको छ । कोरोना महामारी प्रभावित क्षेत्र तथा घरभन्दा टाढा पुगेर सेवा लिन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई केन्द्रित गरेर खोप उपलब्ध गराउने माल्दिभ्सको शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले जनाएको छ ।
लक्षित समुदायलाई मोबाइल खोप सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको माल्दिभ्सको स्वास्थ्य सुरक्षा निकाय (एचपीए), माल्दिभ्स रेड क्रेसेन्ट तथा धमना वेसी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले पुष्टि गरेका छन् । सरकारको अभियानलाई सफल पार्न र खोप लगाउन नागरिकलाई आवश्यक जानकारी दिन पनि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
खोप लगाएपछि हुने सम्भावित समस्यालाई ध्यानमा राखेर एम्बुलेन्समार्फत आकस्मिक सेवा समेत दिने गरी तयारी गरिएको खबरमा उल्लेख छ । माल्दिभ्समा फेब्रुअरी १ देखि कोभिड–१९ विरूद्धको खोप कार्यक्रम सुरु भएको हो । माल्दिभ्समा अहिलेसम्म प्राथमिकतामा परेका ४३ हजार ८ सय १७ जनाले खोप लगाएका छन् । खोप लगाएका धेरैजसो राजधानी माले तथा अन्य सहरी क्षेत्रका रहेका छन् ।
भारतले दशगजामा निर्माण गर्यो रातारात संरचना !